Mpaghara: Wulite Dọkata desktọọpụ iji Zụlite ma mekọrịta Ebe nrụọrụ WordPress gị | Martech Zone
Ọ bụrụ na ịmeela ọtụtụ mmepe WordPress, ị maara na ọ na-agbanwekarị ngwa ngwa na ngwa ngwa ịrụ ọrụ na desktọọpụ ma ọ bụ laptọọpụ mpaghara gị karịa ichegbu onwe gị mgbe niile banyere ijikọ ụzọ. Na-agba ọsọ na sava nchekwa data nwere ike ịbụ ezigbo ụfụ, ọ bụ ezie na ọ dị ka ịtọlite MAMP or XAMPP ịmalite ụlọ ọrụ ntanetị weebụ, nabata asụsụ mmemme gị, wee jikọọ na nchekwa data gị.
WordPress bụ ezigbo mfe site na ije ije si ele ihe anya… na-agba ọsọ PHP na MySQL na NGINX ma ọ bụ Apache Server. Ya mere, itufu ihe dum sava weebụ ije na gị na laptọọpụ nwere ike ịbụ a ton nke efefe… ghara ikwu n'ezie na-amụta otú malite na sava weebụ, ẹkedori na nchekwa data nkesa, na jikọọ abụọ!
Mpaghara: Otu Pịa WordPress nwụnye
Mpaghara na-emepụta saịtị WordPress saịtị niile ikuku zuru oke, yabụ na ị gaghị echegbu onwe gị na ịtọlite ​​ya n'onwe gị. Otu pịa na saịtị gị dị njikere ịga - SSL gụnyere! Ndepụta nke atụmatụ dị oke egwu!
Ọrụ saịtị - Nwa amaala, PH-OS-level PHP, MYSQL, ọrụ sava weebụ. Hazie faịlụ PHP onye ọ bụla, NGINX, Apache, na MySQL ka ekpughere maka edezi.
Njikwa saịtị - Mgbanwe ọkụ n'etiti NGINX ma ọ bụ Apache, nsụgharị PHP (5.6, 7.3 na 7.4 na Opcache), na saịtị URL. Banye faịlụ onye ụdị PHP, NGINX, Apache, na MySQL ka ekpughere nke ọma.
Mmepụta oyiri - Faịlụ niile, ọdụ data, nhazi, tinyere saịtị URL nwere ike gbanwere ma chekwaa ya.
Debug - ngwa ngwa debug PHP (Xdebug dị site na Tinye-ons Library)
HTTPS ọwara - A na-akpaghị aka debanye aha asambodo maka saịtị ọhụrụ. Tunnels ntanetị sitere na Ngrok nyere, URL na-anọgidesi ike na njedebe njikọ dị elu, nyocha webhooks nyocha, PayPal IPN, na API Ezumike
Multisite WordPress - nkwado maka subdomain na subdirectory nrụnye na otu-pịa ka mmekọrịta subdomain ka ụsụụ ndị agha faịlụ.
Blueprints saịtị - chekwaa saịtị ọ bụla dị ka atụmatụ ị ga-eji ọzọ. A ga-eweghachite faịlụ niile, ọdụ data, faịlụ config, na ntọala mpaghara.
Bubata / Mbupụ - gụnyere faịlụ saịtị, ọdụ data, faịlụ config, faịlụ ndekọ na ntọala mpaghara. Ewepu faịlụ site na mbupụ gị dị ka ebe nchekwa, PSD, ndekọ aha, wdg.
mail - A na - etinye MailHog iji gbochie ozi ọ bụla na - apụ apụ site na PHP mail maka ikiri na nchapu (nke a pụtakwara na ị nwere ike ịnwale ozi ịntanetị mgbe ị na-anọghị n'ịntanetị).
SSH + WP-CLI - Mfe mgbọrọgwụ SSH ohere saịtị ọ bụla. WP-CLI nyere, nanị pịnye “wp” mgbe emepe saịtị SSH.
nkwado - gụnyere Nzukọ Ọgbakọ, nkwado ngwa, na tiketi.
Mekọrịta ma si na mpaghara gaa Flywheel ma ọ bụ WPEngine
Ọbụna nke ka mma, enwere ike itinye ma mee ka mmekọrịta gị na mpaghara gị nwee ọ toụ WordPress jisiri Bochum ọrụ:
Dezie WordPress - na Flywheel mmepụta, Flywheel staging, ma ọ bụ ka WP Engine
Ime Anwansi - naanị faịlụ ndị gbanwere agbanwe ga-egosipụta mgbe ị na-agagharị n'etiti gburugburu.
Mpaghara weputara n'ezie Flywheel!
Ngosipụta: Anyị bụ mmekọ Flywheel (anyị na saịtị ahụ kwadoro ebe a!) Na WP Engine.
Tags: apacheconfigdebug wordpressidokwa wordpressife efemmepe obodofaịlụ ndekọmagicsyncPHPrun wordpress obodozipu ozimmekọrịta wordpresssynch wordpressWordPresswordPress blueprintsakwụkwọ ntinye akwụkwọwp-mkpachịweta